ဖဒို မန်းငြိမ်းမောင် ကို သမ္မတ က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ဖဒို မန်းငြိမ်းမောင် ကို သမ္မတ က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး
ဖဒို မန်းငြိမ်းမောင် ကို သမ္မတ က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး
Posted by ကထူးဆန်း on Mar 19, 2012 in Copy/Paste, Myanma News, News |6comments
ဖဒို မန်းငြိမ်းမောင် ကို သမ္မတ က လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေး လိုက်ပြီး နေပြည်တော်ကို ရထားပို့ဆောင်ရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ အထူးဧည့်သည်အဖြစ် ဖိတ်ခေါ်ခဲ့လို့ နေပြည်တော်သို့ သွားရောက်နေကြောင်း The Voice Weekly face book နဲ့ Eleven Media Group face book မှာ ဖတ်ရပါသည်။
မည်သို့ပင်လုပ်ခဲ့စေကာမူ ပြန်လည် လွှတ်ပေးလိုက်သည့် အတွက် ၀မ်းမြောက်စရာ ဖြစ်ပါသည်။
by The Voice Weekly on Sunday, March 18, 2012 at 11:24pm ·
KNU ဗဟို ကော်မတီဝင် ဖဒို မန်းငြိမ်းမောင်ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ညွှန်ကြားချက်ဖြင့် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးခဲ့ခြင်းကို ၀မ်းမြောက်စွာ ကြိုဆိုကြောင်း KNU အထွေအထွေ အတွင်းရေးမှူး နော်စီဖိုးရာစိန်က Eleven Media Gruop သို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
“သူပြန်လွတ်လာတဲ့ အကြောင်းကို တခြား တစ်ယောက်က တစ်ဆင့် အကြောင်းကြား လာပါတယ်။ ကျွန်မတို့ KNU အနေနဲ့ ဒီလို နိုင်ငံတော်သမ္မတက လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးခဲ့တာကို ၀မ်းမြောက် ၀မ်းသာ ကြိုဆိုပါတယ်။ အခု လောလောဆယ်မှာတော့ နေပြည်တော်ကို ဖိတ်ခေါ်လို့ နေပြည်တော် သွားနေတယ်လို့ သိရပါတယ်”ဟု နော်စီဖိုးရာစိန်က ပြောပါသည်။
ထို့အပြင် ဖဒို မန်းငြိမ်းမောင်ကို လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးခဲ့ခြင်းမှာ အစိုးရအနေဖြင့် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သော ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို လုပ်ဆောင်လိုက်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းလည်း KNU ၏ တွဲဖက်အတွင်းရေးမှူး – ၁ ဗိုလ်မှူးစောလှငွေက Eleven Media Group သို့ ပြောပါသည်။
“ကျွန်တော်တို့ အဖွဲ့အစည်းအဆီကို တိုက်ရိုက်အကြောင်းကြားတာမျိုး မရှိဘဲ ပြန်လွတ်လာတာကို မီဒီယာတွေက တစ်ဆင့်သိရတာပါ။ နည်းနည်းတော့ နောက်ကျသွားတယ်။ ဇန်န၀ါရီလထဲမှာ တွေ့ကတည်းက လွှတ်ပေးမယ်လို့ ပြောခဲ့တာ ဟုတ်ပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့ သူတို့ပြောခဲ့တဲ့ အတိုင်း ယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ လုပ်သွားတယ်လို့ မြင်ပါတယ်။ ပြဿနာတစ်ခုကို ဖြေရှင်း လိုက်တယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ နောက်ကျသွားတယ် ဆိုပေမယ့် အစိုးရအနေနဲ့ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကို လုပ်လိုက်တယ်လို့ သုံးသပ်ပါတယ် “ဟု ဗိုလ်မှူး စောလှငွေက ပြောပါသည်။
ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်သည် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ရန်ကုန်လေဆိပ်၌ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကာ ၂၀၁၁ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၂ရက်နေ့က ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ ၄၆၈နှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အက်ဥပဒေ ၁၃/၁ ဖြင့် ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ် အမိန့်ချခဲ့ပါသည်။ ထောင်ဒဏ်တစ်နှစ် အမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် ပြန်လွတ်ရန် ၂၂ရက်အလိုတွင် နိုင်ငံတော် ပုန်ကန်မှု ဥပဒေပုဒ်မ ၁၂၂/၁ ဖြင့် ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်း၊ မတရားအသင်း ပုဒ်မ ၁၇/၁ ဖြင့် ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်ကျခံစေရန် မတ်လ ဒုတိယပတ်အတွင်း အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
The voice weekly နဲ့ eleven ဘယ်သူ မှန် သလဲ မသိဘူး ။ The voice က ပဒို မန်းငြိမ်းမောင် ။
Eleven က ဖဒို မန်းငြိမ်းမောင် ..
ကရင် အသံထွက် အရ ဆိုရင် နှခုလုံး မမှန်ဘူး။
ပ နဲ့ ဖ နှစ်ခု ကြားသံ ဆိုတော့ ကိုယ်တိုင်သာ ထွက်ကြည့် ပေတော့။
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်က.. အစကတည်းကညှိနှိုင်းဆွေးနွေးဖို့.. မပြောထား(မပြင်ဆင်ထား)ပဲ.. မတော်တဆအဖမ်းခံရပြိး ဒီအခြေအနေရောက်ခဲ့တာမို့… တရားရေးပေါ်တက်ရတာလို့.. သဘောပေါက်မိပါတယ်..။
တရားရေးနဲ့.. အုပ်ချုပ်မှု(အစိုးရ) ပါတ်သက်ယှက်နွယ်နေပုံမပေါက်အောင်.. မြန်မာအစိုးရက လုပ်ပြသွားတာကိုလည်း.. (စေတနာမှန်.. သဘောရိုးနဲ့ဆိုရင်) ကြိုဆိုပါတယ်..။
ကရင်လူကြီးတွေ. “ဖထီး”လို့ခေါ်ကြတာမို့.. “ဖဒို”လို့ ခေါ်နိုင်မယ်ထင်ခဲ့တာ…
ဧရာဝတီမှာ.. ပဒိုရေးတော့… ပဒိုလို့ပဲ.. မှတ်လိုက်ပါတယ်ဗျာ…
ဧရာဝတီသတင်းဌာနက.. ဖထီးတို့နဲ့ နီးစပ်တာမို့.. အမည်မှန်သိမယ်ထင်လို့ပါ…။
ဟုတ်ဝူးထင်တယ်နော် ကျနော်သိသလောက်က ပဲခူးမှာဖဒိုဆိုတဲ. မြို.နယ်ရှိတယ်… ကျနော့ငယ်ချင်းလက်ရှိနေတာ… အဲ.ဒါကိုပြောဒါထင်တယ်… ဖထီးကသပ်သပ်ထင်တယ်…. (အဲ.ဒါကဦးလေးအဘအဲ.လို သဘော….ထင်တယ်)